Cape Fox - Ezanyisayo - Mzantsi Afrika
Cape Fox, Fox-backed Fox [Vulpes party]
I-Cape Fox yencinci efumaneka eMzantsi Afrika. I-Cape Fox isiliva-nangwevu ngombala kunye neendlebe ezinkulu. Inombala omnyama emlonyeni. Ezi ndala zilinganisa i-350 mm emagxeni kwaye zinokulinganisa kwi-2.5-3 kg ubunzima. Ngokugqithisekayo, kunokwenzeka ukuba umsila usebenza njengento engalinganiyo xa ujikeleza kwaye uguqa.
I-Cape Fox i-zingela izinambuzane, iimpuku nezinye izilwanyana ezincinci. Ngamanye amaxesha zitya iziqhamo zasendle kunye ne-carrion kwiindawo zokulima.
I-Cape Fox ihamba ngokuhlwa. Inkqubo yayo yentlalo ayiqondakali kakuhle kodwa iya kubonakala iyingqingili, njengenye.
Izibonelelo ikakhulukazi ilizwe elivulekileyo, ukusuka kwiindawo ezisemaphandleni avulekileyo kunye namaqabunga ahlakazekileyo ukuya kwintlango, kunye nokunyuka kwi-fynbos. Udibanisene kakhulu kunye neengqimba zamanzi. Ixhaphake eMzantsi Afrika, na- kwiindawo ezininzi zePhondo leNtshona kunye neNyakatho Koloni, eMpuma Koloni (ngaphandle kwecala elingasempumalanga) kwi-Free State, entshona nangasenyakatho-ntshona KwaZulu-Natali nakwiPhondo loMntla-Ntshona. Kwakhona naseLesotho.
Ubunzima (Ibhinqa) 2,5 kgWeight (Amadoda) 2,8 kgLength (Ibhinqa) 94 cmLength (Amadoda) 94 cm Ixesha leeNyanga eziyi-52 Angabantwana abancinane1 - 5 i-OrderCarnivoraFamilyCanidae.
1 - 5 abatsha bazalwa ngo-Oktobha - Novemba emva kwexesha lokuthotyelwa kweenyanga ezi-2. Inkazana inesibini kunye neembini ezimbini zomzimba zesisu.
Inamaqhwenga ayi-5 kwinqanaba langaphambili, kodwa inzwane yokuqala kunye no-zipho ayibonakali kwi-spoor. lnamazipho amane ezinyaweni. Amacwecwe asempilweni ngaphambili anqabile, abukhali kwaye aphihliweyo, malunga ne-15 mm ubude ngaphesheya kwekhalo. Ezo zisezinyaweni ziyalingana ngobude. Amanqaku okuMmandla.
Ngenxa yemigudu yaso yasebusuku iCape Fox idla ngokubulawa endleleni ebusuku kwaye isalathisi sinyango sabalimi abaninzi eMzantsi Afrika ngenxa yenkolelo yokuba zibulala amawundlu. Nangona eyaziwayo ukuba atyelele kwiimvana ezisandul 'ukuzalwa, iziganeko zale nto ziphantsi kodwa zisatshutshiswa.